Car Mat, Cover kursiga gaariga, teendhada saqafka gaariga - Yuancheng
Soo saare Xirfad Leh Oo Dhoofiye Ku Jira
Gawaarida Gawaarida & Alaabada Bannaanka
200gsm xumbo + midab beddelaya PE filimka hadhka qorraxda oo leh shaashad kartoon Gawaarida sunshade ee daaqadda hore / xumbo dariishadda hore ee afka / xumbo Sunshade / PE xumbo daabacaadda baabuurka hadhka qorraxda Waqtiga Hoggaanka: Tirada (Cadad) 1000 - 3000 5000 - 10000 15000 - 20000> 20000 Est. Waqtiga (maalmaha) 20 30 40 In laga wada xaajoodo Baakada Faahfaahinta Baakadka oo ay ka mid yihiin: 1 x Car Windshield Sunshade, 2 x Suction Cups card card + Bacda OPP, 100pcs / ctn, ctn size: 62 * 55 * 67cm Function: 1. Pro ...
Daboolka isteerinka gawaarida, PU iyo giraanta gudaha ee deegaanka 'TPR', naqshadeynta Gawaarida Gawaarida istiraatiijiga ah waxay bixisaa difaac ka hortageysa, dildilaaca iyo xoqida ka dhalashada qorraxda iyo cimilada ba'an. inta badan 95% baabuurta suuqa ku jirta, sidoo kale waxay soo saari karaan cabbirro waaweyn oo gaaraya 42,45,47 iyo 50cm oo loo adeegsado Baabuurta Xamuulka .. Dhammaan daboollada oo ay sameeyeen maqaar maqaar nuqul tayo sare leh oo leh taabasho gacmeed. Midabada Mulit ee maqaarka ...
Yuancheng Qaboojiyaha la qaadan karo Qaboojiyaha Car 12V Gaari Qaboojiyaha leh shaashadda taabashada kombaresarka Gawaarida RV Kaamamka Safarka Dibadda Wadista Wadista Farsamada YC-16SS DC CAR REFRIGERATOR Product Product: 16L DC Car Qaboojiye Nooca Cimilada: SN, N, ST, T Voltage: DC12V / 24V Qaboojiyaha: R134a Heerkulka kululaynta: 20-55 temperature Heerkulka Qaboojiyaha: -20 ℃ Cabbirka Badeecadda: 605 * 340 * 273.5mm Cabbirka Kartoonka: 660 * 395 * 360mm Xaddiga Xaddiga 20Ft / 288PCS 40HQ / 693PCS Waqtiga Lead: ...
Saddex-xagal Adag teendhada saqafka sare ee laabashada adag
Cabbirka furan: 210cm * 144cm * 170cm Qolof adag oo leh dabool kore iyo hoose, laab laaban / hawlgal fudud, 3-4 qof ayaa adeegsada. Waxyaabaha Faahfaahsan: * Qolof adag (kor iyo hoos): ABS + ASA; * Jirka: 190gsm Shan maro oo cudbi polyester maro cudbi （biyuhu: 2000); * Guddi saxan: 8mm oo dherer ah plywood * Furaashka: 5cm dherer PU xumbo + dabool cudbi oo la dhaqi karo * Windows: 125gsm mesh Waxyaabaha alaabta: 1.Jaranjarada telescopic-ka waxay si toos ah uguxirantahay teendhada saqafka, talaabooyinka rarka iyo dejinta waa mid fudud oo .. .
Cabbirka furan: 221cm * 190cm * 102cm Muuqaalka quruxda badan / Jaranjarooyinka iyo gogosha sariirta ayaa la mideeyay 2-4 qof ayaa adeegsada Waxyaabaha Faahfaahin: * Daboolka banaanka: 430g tarp PVC; * Jirka: 220g 2-lakab PU dhar caag ah oo caag ah; * Frame: aluminium; * Furaashka: 7cm dhererkiisa PU xumbo + dabool cudbi ah oo la dhaqi karo * Windows: 110gsm mesh Waxyaabaha astaamaha: 1. Dib loo celin karo Jaranjarada ayaa si toos ah ugu xiran teendhada saqafka ...
BSCI Kordhinta BSCI AY SOO BAXDAY OO LAGU SAMEEYAY MAR.5,2021
BSCI 2021 dabagalka dabagalka waxaa lagu sameeyay Mar.3,2021 warshadeena. Kadib maalin mashquul ah oo kormeerka warshadda ah, Yuancheng Auto Manufacturer Co., Ltd. ayaa mar kale mariyay hantidhawrka.SGS waxay soo saartay nuqul cusub oo ah BSCI 2021. Waana sanadkii 10-aad ee aan ka gudubnay xisaabinta BSCI. Warshad BSCI ...
Barta quraaraddu waa daciifnimo mustaqbalka
Qandaraaska Nan Yang galaaska FG506 qandaraaska mustaqbalka ee maanta ayaa dhacay maanta, furitaanka qiimaha 901 yuan / ton, midka ugu sareeya 904 yuan / ton, qiimaha ugu hooseeya 888 yuan / ton, wuxuu ku xiran yahay 895 yuan / ton, qiimaha ganacsi ee maalintii kahoreysay wuxuu kudhacay 9 yuan / ton , mugga 413570, yaree maalinta ganacsiga ee hore 133700, 387976 gacanta ho ...
Horumarinta warshadaha dhalada ee Shiinaha
Sida waddammada ilaaliya tamarta warshadaha ilaalinta tamarta iyo yaraynta qiiqa, awoodda xad-dhaafka ah ee hoos timaadda dareenka sare ee suuqa kaladuwan ee walaaca sii kordhaya. Waqtigan xaadirka ah, inta badan maalgashadayaasha iyo ganacsatadu way ogyihiin warshadaha dhalada waa ka yar yihiin, sida ku xusan booqasho dhowaan ...
Yuancheng ka xoog badan: Mar kale soo noqo
Bishii Oktoobar 15, Carwadii 126-aad ee Canton waxay ku bilaabatay sidii loogu talagalay. Yuancheng Auto Accessories Manufacturer CO., LTD waxay umuuqatay muuqaal cusub oo wata shaxan cusub. Midabka cusub ee isbeddelka hooska qorraxda iyo istiraatiijiga istiraatiijiyadda istiraatiijiga ah, kuwa ugu fiican ee iibiya taxanaha hadhka qorraxda, gawaarida cusub ee qaboojiyaha ...
Muxuu keenay Yuancheng Carwadii 125aad ee Canton?
5-ta May, wajiga 3-aad ee Carwada 125aad ee Canton ayaa soo dhow. Qolka Yuancheng ee 4.2F16-18 wali wey ku badan yihiin dadka soo booqda. Sida soo-bandhigaha soo noqnoqda ee Canton Fair, Yuancheng wuxuu muujiyey naqshaddii ugu dambeysay ee isdaba-joogga daboolka isteerinka, taxanaha qorraxda, taxanaha teendhooyinka saqafka baabuurka iyo qaboojiyaha baabuurta ...
Taambuugga Gawaarida Caan ah, Qaboojiyaha Qamriga Gawaarida, Mako Gaari qaboojiye, Gaari qaboojiyaha la qaadan karo 12v, Ku Dabool Baabuurka Hoostiisa, 12v Qaboojiyaha Baabuurta Qaboojiyaha,